Ngaba ungathengisa ngokudibeneyo kunye neAdSense? - Learn Expert Blogging
Post category:Adsense / Umanyaniso lweNtengiso / Earn Money Online
Ngokuqinisekileyo ungasebenzisa ukuthengisa ngokudibeneyo kunye neAdSense kunye kwibhlog yakho okanye iwebhusayithi. Yindlela elungileyo yokuphucula indlela yokwenza imali kwibhlog yakho. Usebenzisa zombini ezi zinto, ukufumana ikhomishini ngokukhuthaza imveliso yakho okanye yabanye abantu kunye nokufumana imali ngokubonisa ubungakanani bezibhengezo zentengiso.
UGoogle ukuvumela ngokusemthethweni ukuba ufake imveliso yakho yokuqhakamshela amakhonkco kunye neentengiso. Nantsi umfanekiso weskrini.
Ukwabelana ngamava am, iqala nini ibhlog yam kudala ubuya, Ndizilinganisela kuphela kwi-AdSense kuphela. Ngokuhamba kwexesha, as I improved my knowledge and getting better in the blogging field.
Kungekudala ndiyaqonda, Unokwenza imali nge-AdSense ukuya kuthi ga enkulu 5000+ Iidola ngenyanga ukuba unezigidi zomgangatho wezithuthi kwaye kufanele ukuba zivela e-US, UK, ICanada njengamazwe.
Njengoko bendikwinqanaba lokuqala, Kwakunzima ukufikelela kwinani eliphezulu kangaka leendwendwe.
AdSense kunye neAmazon, ezinye iintengiso ezibandakanyekayo kwiphepha elifanayo leWebhu
Ukudibana kokuthengisa kunye nezinye iiNethiwekhi zeNtengiso -Okunye okunye kweAdSense
Ngelo xesha ndiqala ukujonga ezinye iindlela zokuphucula umvuzo wam wokubhloga. Apho ndafumana ifayile ye- iphepha elisemthethweni likaGoogle Ukuchaza imvume yokuthengisa ngokudibeneyo kunye neAdSense akukho kwaphulwa komgaqo-nkqubo nokuba usebenza ne-amazon okanye amanye amahlakani..
Emveni kwalonto, Ngokukhawuleza ndibhalisela inkqubo ye-amazon. Ngelo xesha ibhlog yam ibifumana kuphela inani eliqingqiweyo labakhenkethi elingamkelekanga ukufumana umvuzo omnandi kwi-AdSense.
Nalapha, Ndikucebisa ngokobuqu ukuba ungowokuqala kule ntsimi ye-bogging, endaweni yokugxila ngakumbi kwiAdSense, Kuya kufuneka uqale ngokuthengisa ngokubambisana. Emva koko, Joyina i-AdSense emva kweenyanga ezininzi xa uqala ukufumana inani elikhulu leendwendwe.
Awunakho ukuthelekisa umvuzo wokudibana neAdSense. Umdibaniso wokuthengisa lishishini eliqhubela phambili elikuvumela ukuba uzuze 1000 + Idola ngokulula uya kuyenza kunye nesixa esincinci sezithuthi. Nabu ubungqina bam bokwamkela imali kuphela 100 kunye netrafikhi ngosuku.
Uya kumangaliswa kukwazi ukuba kuphela likhulu labakhenkethi ngenyanga ndwendwela iwebhusayithi yam ngelixa kungekho thuba linjalo lokufumana $70 ngenyanga nge-AdSense.
Nangona kunjalo, Sisigqibo sobulumko ukufumana imvume yeAdSense kwaye wenze intengiso yokuhambelana nayo. Kungenxa yokuba awulahleki nantoni na endaweni yoko ufumana iidola ezininzi. Nokuba zimbalwa okanye zininzi.
I-AdSense yanamhlanje ayifani neminyaka edlulileyo, Kuya kufuneka ubeke umsebenzi onzima wokufumana umvuzo olungileyo ngenyanga. I-Google AdSense yimveliso kaGoogle. Liye laqaqamba kangangokuba lifuna umzamo omkhulu kwaye ekubuyeni, awuyi kuzuza ikhulu leepesenti ngoku.
Kwenzeka ntoni ngeenxa zonke?? Kulungile, iinkcazo zininzi kodwa apha ndikucebisa bhalisela i-Ezoic.
I-Ezoic lelinye lamaqonga afanayo kwiAdSense asebenzisa itekhnoloji yobukrelekrele bokuzenzela ukubonisa ikhowudi yeAdSense. Ukufumana imvume kwi-Ezoic kufuneka ulandele yonke imigaqo-nkqubo ye-AdSense kwaye uyamkele. ukuba unayo emva koko uyafaneleka ngokuzenzekelayo kwiintengiso ze-Ezoic.
Ke yintoni umahluko phakathi kokufumana i-EZOIC kunye neAdSense, mandicacise ngomzekelo. Masithi ukuba uyayifumana 2000 iimbono zekhasi ezivela eUnited States, kwimeko yeAdSense, uya kuphela phantse yethu malunga $5 ngeembono eziliwaka ngelixa uphumeze iintengiso ze-Ezoic kwiwebhusayithi yakho uya kuba nayo 10 ukuya 12 Iidola kunokuba ngaphezulu ngokulula.
Ukuba uphumelele ekuqhubeni 50000 iindwendwe kwi 100000 Ukujonga iphepha ngenyanga emva koko unokuhamba ngokulula kumaqonga aphuculweyo anje abeendaba bayeza okanye Ukuphumelela. Ezi zimbini ezinye iiplatifti zingaphaya kokulindeleyo.
Kukonke, kuyancomeka ukuba wenza indlela yokufumana imali kokubini kwi-AdSense nangokuthengisa ngokubambisana. Ungayiqhuba kwibhlog yakho okanye kwiwebhusayithi ngaphandle kokophula. Kunye nayo, Kuya kufuneka uthathe ezinye iindlela zeAdSense ezinje ngeEzoic, Imidiya yemidiya kunye nentengiso iyachuma, njl. Oku kuyakuba luncedo ngakumbi kwaye kungaze kukudanise.
Yimalini onokuyenza ngeGoogle AdSense
Ngaba kuya kufuneka ndithenge i-SSL kumamkeli wam?
Ngaba uMfundi unokufumana imali kwi-Intanethi?
Ngaba ndingalithenga igama lesizinda kwaye ndilisebenzise naphina?
Previous PostYimalini onokuyenza ngeGoogle AdSense?